Le CPS et l’UA Constate que, malgré les nombreux progrès réalisés, certaines dispositions de la Feuille de route restent encore à mettre en oeuvre, en particulier l’article 20, et, par conséquent décide de maintenir la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l’UA et les sanctions imposées contre Madagascar – MyDago.com aime Madagascar
Le CPS et l’UA Constate que, malgré les nombreux progrès réalisés, certaines dispositions de la Feuille de route restent encore à mettre en oeuvre, en particulier l’article 20, et, par conséquent décide de maintenir la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l’UA et les sanctions imposées contre Madagascar
7 pensées sur “Le CPS et l’UA Constate que, malgré les nombreux progrès réalisés, certaines dispositions de la Feuille de route restent encore à mettre en oeuvre, en particulier l’article 20, et, par conséquent décide de maintenir la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l’UA et les sanctions imposées contre Madagascar”
15 février 2013 à 5 h 54 min
Efa-taona aty aoriana mbola mitovy foana ny feon-dokanga !
Tsy aleo ve mihaino an’itony ê ?
15 février 2013 à 9 h 19 min
Raha ny voalzany CPS dia tena tsara fa toa tsy manana ny hery entina hanaterehana ilay fanam-pahakeviny ry zareo sy ny SADC. Amiko dia ity no tokony ho lazaina aminy AMPIARO – AMPIARO – AMPIARO ka izay manakana dia ho faizina.
Tsy mahasokatra ilay youtube aho, sao mba misy lalana hafa azo aleha ?
Misaotra anao liana amin’ilay izy ! Virtuose, mazana ilay tary kely !
Raha manao fitadiavana ao amin’ny Google :
Miclen LaiPang Concert Lady Chapel Ely Cathedral Dailymotion, dia mahita :
Asa raha mety aminao io ?
Momban’ilay fanambaràn’ny CPS indray, ny vahoaka tsy vonona haneho izay tiany ! Lasa eritreritra mihintsy aho hoe : Fa inona marina no tadiaviny ? Ny hitohizan’izao fiainana izao ve ?
MyDago: mba alefaso eto rehefa tonga ny fotoana mahakasika ny vao2 etsy ambany.
(Fa skoubidou etc ny nanaovana avy nilomano, dia tsy lasa rehefa tonga ny « NDAO ho any AMBOANJOBE »! dia nilaozan’ny akama isany!!)
Dia: miangavy indrindra mba hampahafantarina ETO ê!!
recueilli dans Moov
[Mpitolon’ny Magro. Hampiseho hery ety ivelany fanindroany ary miantso ireo kandida hivondrona
(13-02-2013) – Hivoaka ao amin’ny Magro indray izany ry zareo. Tsy mbola voafaritra ny daty sy ny toerana fa amin’izany hetsika izany no iantsoan’ireo mpitari-tolona izay rehetra nosokajian’ny mpitondra ho tsy tia tanindrazana mba hamondronana ny hery.]
15 février 2013 à 14 h 04 min
Izay anie no efa mankaleo ahy hoe : Mbola msy hantenaina ihany ve @ »
izany GENA rehetra efa voavidy izany e!!!LEO BE ZA MARINA e!!!fandaniam-bola
fotsiny ity fivoriana lava ity , ( vola miditra ho andry zareo koa mantsy io mody kivorivory lava io koa tsy
dia mivaky loha loatra izireo moa efa hay koa fa ny GENA dia mora VIDIANA MORA2.
Dia ahoana Inona no andrasana indray izany izao???fa nanao inona koa izany ireto manam-boninahitry ny SADC
tonga tao sa nanaraka iny lalana iny koa sa tratry ny VIRUS ?????AIZA IHANY IZY ITY E???mbola tsara torimaso
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY MANANA TANJONA AMIN’NY FITANTANANA NY FIRENENA INTSONY RAJOELINA.
Suivant Article suivant : NAIKA ELIANA : TSY MAHAZO MANOLOTRA SY MANDATSAKA KANDIDA RAJOELINA